Haydarooliga Ag dhululubada ah - Ningbo LD Makiinado Co. Ltd
Haydarooliga Ag dhululubada
Haydarooliga welded dhululubada
Custom Haydarooliga dhululubada
Haydarooliga Tie Rod dhululubada
Ha la yaab leh; qiimaha yar yahay sida dhabta ah waa sida aad ka arki. Waxaan marna aad Doqon doonaa tayada. All dhululubada our Haydarooliga waxaa soo saaray in ISO: 9001 heerarka, cadaadiska-baaro & qaado heli Standard 2-Sano damaanad, iyo adeegyada Door-to-Door..
Sababo la horumarinta technology electronic, haatan waxaad na siin kartaa waydiinta online. Waxaan aad u jawaabi doonaa in 5 saacadood, iyo dhibaato ah ma for kala duwan yihiin waqtiga. Marka aad go'aansato nooca dhululubada si ay u iibsadaan, ka dibna waxaan ku siin doonaa adeegyada maraakiibta albaab-ilaa-albaab 20 maalmood gudahood.
Waxaan nahay soo saaraha si toos ah in China oo leh taariikh ka badan 30 sano. Waxaa jira tiro balaadhan oo ah tirada dhaleen iyo stroke dhererada for macaamiisha si ay u doortaan, iyo sidoo kale lix nooc oo dhululubada Haydarooliga: welded dhululubada ah la Clevis End, End Clevis-Thread, End Tube iyo Rod End, Tie-Rod dhululubada ah la 2500PSI iyo 3000PSI. tirada dhaleen Available dhaxayn 1.5 inches 5 inches, dhererka Stoke dhaxayn 4 inches ilaa 48 inches. Waxa kale oo aanu awood u leeyihiin in ay soo saaraan NFPA iyo dhululubada caadadii kuwa macaamiisha leeyihiin shuruudo gaar ah.
Nidaamka Maareynta Tayada LD Makiinado Company Corporation ayaa shahaado in ISO 9001: 2012
LD Makiinado Company